Fifaninanana Slam maneran-tany :: Tafita amin’ny manasa-dalana ny solontena malagasy • AoRaha
Fifaninanana Slam maneran-tany Tafita amin’ny manasa-dalana ny solontena malagasy
Hiatrika ny dingan’ny manasa-dalana amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena amin’ny Slam i Louiz Faza, tompondakan’i Madagasikara misolo tena antsika. Tamin’ny talata teo no niatrika ny dingan’ny fifanintsanana izy, ka nandresy an’ireo mpifanandrina taminy. Hifampitana aminy amin’io dingan’ny manasa-dalana io ny solontenan’i Ecosse, Rosia, Norvezy, Israely ary Maraoka, izay hotanterahina, anio.
Natao tamin’ny alalan’ny tambajotran-tserasera « zoom » miainga avy any Paris Belleville ny fifaninanana noho ny tranga ara-pahasalamana maneran-tany ary hita eo amin’ny tambajotran-tserasera sosialy fesiboky sy ny tranonkalan’ny “Grand poetry slam”, mpikarakara an’ity fifaninanana ity ihany koa. Poeta roapolo mahery no nifampikatroka tamin’izao andiany fahairaika ambin’ny folo izao. Horakoraka avy hatrany no nandraisan’ireo mpitsara ny fahaiza-manaon’i Louiz Faza. « Teny amin’ny gara », io raha fehezina asiana lohahevitra ny lahatsoratra voalohany natolony. Tantara ny amin’ny fitsaran’ny manodidina, ny endrikendriky ny hafa nanoloana tranga iray. Naoty maherin’ny sivy avokoa no natolotr’ireo mpitsara tamin’izany.
Teo amin’ny lahatsoratra faharoa kosa no nahenoana ny tantarana tovovavy iray izay tia vehivavy sy ny fiainany an’izany. Teo no nahazoany naoty folo, izay farany ambony indrindra, avy amin’ireo mpitsara. Miandry ny hitranga anio indray izany isika. Fa raha ny fizotry ny fifanintsanana tamin’ny talata, ambony ihany ny fanantenana hahatafitana amin’ny famaranana.
Fifaninanan-kira TF1 :: Tafita amin’ny famaranan’ ny «The Voice» i Marghe